समाज – Ekathmandunepal
७ चैत्र २०७४, बुधबार १७:५४ ekathmandu Nepal 0
विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा अधिकांशले खाजाको रुपमा ममलाई रोज्दछन् । मम जति मीठो हुन्छ त्यत्ति नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो भने हुँदैन । प्रायजसो मम खाने व्यक्तिलाई गम्भीर खालका रोग लाग्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । हामीले […]
१० फाल्गुन २०७४, बिहीबार १५:३८ ekathmandu Nepal 0
कर्ण बहादुर अधिकारी। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच पार्टी एकता हुनै लागेको अवस्थामा मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत कवितात्मक शैलीमा कमरेड प्रचण्डलाई केही कुरा भनेको थिए उक्त भनाई प्रति बिमति जनाउँदै एक जना माओवादी […]
श्रीमानबाट याैन अानन्द नभएपछि सुसाइट नाेट लेख्दै अात्महत्या
१२ पुष २०७४, बुधबार १३:३४ ekathmandu Nepal 0
एजेन्सी । भारतको नयाँ दिल्लीमा एक महिला डाक्टरको आत्महत्याको विषयले सनसनी फैलिएको छ । एम्स अस्पतालमा काम गर्ने प्रिया बेदीले आत्महत्याअघि एक सुसाईड नोट लेखेर फेसबुकमा आफूले आफ्ना आत्महत्याको जिम्मेवार श्रीमान भएको बताएकी छन् । […]
१२ पुष २०७४, बुधबार १०:५२ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौं,१२ पुस– २०७५ सालका मुख्य चाडपर्व कहिले पर्नेछन् ? शेयर गरौं !! २०७५ सालको दसैंको टीका २ कात्तिकमा परेको छ । यसैगरी भाइटीका २३ कात्तिकमा परेको छ । २०७५ सालको दसैं २४ असोजमा सुरु हुने छ […]
भाउजूलाई कोठामा यस्तो अवस्थामा देखेपछि देवरको होशै उड्यो…..
११ पुष २०७४, मंगलवार १५:१२ ekathmandu Nepal 0
पैसाको आर्थिक तनावले मानिसलाई जे गर्न पनि बाध्य पार्छ । तर, यहाँ घुम्नका लागि श्रीमानले सय रुपैयाँ कम दिँदा श्रीमतीले यस्तो कदम उठाएकी छिन् जसलाई सुनेर आश्चर्य नै लाग्छ । यो खबर जयपुरको कानोता थाना […]
खाट कराउदै थियो चुइ चुई…मेरो निद्रा खुल्यो येसो झ्यालबाट हेरेको त……
१० पुष २०७४, सोमबार १७:२६ ekathmandu Nepal 0
म बारम्बार गई रहन्थे त्यो घरमा किनकी मलाई त्याहा जानु मज्जा लाग्दथ्यो .. म रमेश दाइको कुरा गर्दैछु । रमेश दाइको बिहे भएको धेरै भएको छैन जम्मा जम्मी त्यस्तै सात बर्ष जती भएको होला । […]
डाक्टर बन्न आएका थिए युवती, युवक इन्जिनियर, प्रहरीले समात्यो आपत्तिजनक हालतमा
९ पुष २०७४, आईतवार २३:०१ ekathmandu Nepal 0
एजेन्सी। पढेर डाक्टर बन्ने सपना लिएर आएका युवती र इन्जिनियरिङ पढिरहेका युवकहरुलाई प्रहरीले आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गरेको छ । यहाँ लामो समयदेखि व्यवसायिक यौनधन्दा चलिरहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा […]
५ पुष २०७४, बुधबार ०९:४३ ekathmandu Nepal 0
वीरगञ्ज, ५ पुस । वीरगञ्ज उपमहानगरापलिका– २४ स्थित पटेल नगरमा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा बिहान सवा ६ बजेतिर भीषण आगलागी भएको छ । आगलागीमा परी २ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्योगभित्र कति […]
१ पुष २०७४, शनिबार १५:०१ ekathmandu Nepal 0
कृत्रिम यौन अंगप्रति युवा युवतीको आर्कषण बढदो । द कण्डम हाउसले दमकमा नै पहिलो पटक विभिन्न ब्राण्डका कण्डम तथा सेक्स टोयहरु विक्रि वितरण गर्दै आइरहेको छ । दमक | केहि समय अघि सम्मपनि यौनको विषय खुलेर […]
देउवाले विश्वास गरेका ज्योतिषी वाम गठबन्धनको चुनाव चिह्नमा छाप लगाउने त परेनन् ?
२७ मंसिर २०७४, बुधबार १७:०६ ekathmandu Nepal 0
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाल गृहमन्त्रीको पनि कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । विगतमा आफूमाथि लागेको अक्षमको दाग धुन पनि उनले दुई–दुईवटा भारी बोकेका हुन सक्छन् । तर, आफ्नै ज्योतिषीका कारण उनको योजना विफल होलाजस्तो पो लाग्न थाल्यो […]